Semalt: Azontsika atao ve ny mifehy ny spam momba ny Google Analytics?
Vao haingana, maro ireo olona no hita fa mifanakalo hevitra amin'ny fomba hanakanana ny spam referans ary tena manan-danja ny famoahana channel. Eto Andrew Dyhan, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia nizara fomba sasany hanesorana spam referrer avy amin'ny Google Analytics. Saingy aloha, andao hojerentsika kely izany.
Fampidirana amin'ny spam amin
'ny Google Analytics referrer
Google Analytics referrer spam dia endriky ny hacking izay ampiasaina mba handefa antontan-kevitra sandoka amin'ny kaontinao analytics. Ny fampiharana manokana dia ampiasaina amin'io lafiny io, izay antsoina hoe Measurement Protocol, izay manangona vaovao momba ny tranonkalanao ary manimba ny tatitra Google Analytics amin'ny famitana azy amin'ny fomba iray na ny iray hafa. Maniraka fifamoivoizana sandoka ao amin'ny tranokalanao izy, mampiseho ireo hitsapana ao amin'ny Google Analytics. Ho an'ity fikasana ity, ireo mpilalao hackers dia mampiasa ID manokana ho an'ny tompon'ny tranonkala sy ireo manam-pahaizana Google.
Na mahazo fifamoivoizana sandoka ianao na hitsikitsika marina, dia hita foana ao amin'ny tatitry ny tranonkalan'ny fitsidihana. Raha te-hanamarina izany ianao, dia tokony hiditra amin'ny fizarana Acquisition amin'ny kaonty Google Analytics ianao ary jereo ny safidy referendana izay ahitanao ny lisitry ny spam. Ny solontenan'ny SPAM fotsiny dia mamorona karazana entan'ny UA ary mandefa fifamoivoizana malaza amin'ny vohikala amin'ny fomba samihafa.
Ahoana ny fomba hiadiana amin'ny spam? Referenţa amin'ny Google Analytics?
Ho an'ny mpandray anjara, ny toro-hevitra dia ny handehananao any amin'ny Settings ao amin'ny tontonana admin. Eto ianao dia tsy maintsy manamarina ny safidy Bot Filtering ary tsindrio ny Hitsingana rehetra Hits..Izany dia tsy hanaisotra ireo fitsapana izay nateraky ny spiders sy bots. Hatreto, ity no fomba fanao tsara indrindra hiadiana amin'ny spam referrer Google Analytics. Azo atao amin'ny fomba maro hafa koa ny olana, saingy ity no fomba fanao tsara indrindra hatramin'izao.
Ahoana ny amin'ny filtres?
Noforonina ny sivana mba hanilihana ny spam referral amin'ny tatitra Google Analytics. Raha te hamorona filtres ianao, dia tokony handeha amin'ny safidy Filters ary mamorona azy ireo amin'ny isa manan-danja. Azonao atao koa ny mampiditra filaharana efa natsangana eto ary mifidiana ny safidy Custom mba ahafahan'izy ireo mavitrika. Azo atao ny manaisotra na manilika sivana mifanaraka amin'ny fepetra takinao. Raha mampiasa fomba fitsaboana maro ianao, dia tsy maintsy mamorona filtre maromaro mba hiarovana ny tranonkalanao amin'ny malware, spam, ary hackers.
Afaka manamboatra sivana ve isika?
Soa ihany fa azo atao ny manamboatra filters. Ny mpitsikilo spam referrera dia manome safidy maro isan-karazany. Azonao ampifandraisina amin'ny kaonty Google Analytics fotsiny izany. Raha vao mifandray ianao dia ny dingana manaraka dia ny fiarovana ny tranonkalanao amin'ny solosaina sy adiresy adiresinao ao amin'ny kaonty Google Analytics.
Inona no fanangonana angona angona?
Ny fanangonana angona azo ampiasaina dia ampiasaina mba hanangonana angona avy amin'ny kaontinao Google Analytics amin'ny alalan'ny fanalefahana. Amin'ity tetika ity, dia mila milaza ny tenimiafinao momba ny fananana fanadihadiana i Google ianao isaky ny mitsidika ny tranokalanao ny olona sasany. Raha fantatrao ny fampahalalana dia havaozina ny kaontinao, ary azonao atao ny manontany raha ara-dalàna ny fifamoivoizana na tsia.
Eto dia misy fomba maro ahafahanao mampiasa ny filaharanao ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Ny famoahana spam referrement miaraka amin'ireo teknika ireo dia azo atao. Na izany aza, tsy misy fomba ahafahana miantoka ny vokatr'izany Source .